Dowladda Mareykanka oo si aan hore loo arag u taageertay RW Rooble (Farriin cusub) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
War kasoo baxay Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa baaq u dirtay hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee shirka uga furmayo maanta magaalada Muqdisho.
Farriin ka timid Waaxda Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa lagu caddeeyay in Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu heysto taageerada buuxda ee Mareykanka.
“Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya waa inay ka faa’iideystaan ​​fursaddan oo ay hadda dhameystiraan heshiis doorasho oo dan ugu jirto dadkooda iyo dalkooda. Ra’iisal wasaare Maxamed H. Rooble wuxuu heystaa taageeradeena buuxda” ayaa lagu yiri farriinta Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka.
Warkan ayaa ka dambeeyay War-saxaafadeedkii Beesha Caalamka ee shalay soo baxay, kaasoo loogu baaqay inuu shirkan yahay fursadii ugu danbeeyay ee dalka loogu jiheynayo Doorasho.
Previous articleShan Arrimood oo Shirka Rooble hoggaaminayo uga duwan yahay Shirarkii Farmaajo (Akhriso)
Next articleShirkii Doorashada oo Goor dhow ka furmaya Afisyoone iyo Farmaajo oo ka qeyb galeynin